बैठकमा बस्दिनँ, पार्टी निर्णय पनि मान्दिनँ
काठमाडौं, १६ कार्तिक। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवादले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल यतिवेला वारपारको अवस्थामा पुगेका छन्। हिजोमात्रै दाहालले १२ दिनपछि ओलीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त भेटमा ओलीले ‘अब सँगै जान सकिँदैन्, अलग अलग जाऔं’ भनेर आफूसँग भनेको दाहालले आज सचिवालयका ६ जना बहुमत सदस्य सम्मिलित भेलामा ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त भेलामा दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहभागी थिए।
भेलामा सहभागी नेता खनालले प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटवार्ताबारे भने, ‘हिजो अध्यक्ष कमरेड दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग भेट्नुभयो । उहाँले प्रचण्ड कमरेडसँग म पार्टीको निर्णय पनि मान्दिनँ। तपाईले जे निर्णय गरे म त्यही मान्छु ? मलाई असहयोग गर्ने ? भनेर भन्नुभयो अरे। उहाँले अलग अलग भएर जाऔं भनेर पनि प्रस्ताव गर्नुभयो अरे। आज प्रचण्डजीले हामीलाई यही ब्रिफिङ गर्नुभयो। हामी छलफलमा छौं। पार्टीभित्र गम्भीर संकट आयो। कसरी एकता बचाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं।’